Andian-jiolahy Sy Ady Ara-Barotra : Karazana Meksika Ahoana No Andrasan’ny Filoha Vaovao ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jolay 2018 12:11 GMT
Vakio amin'ny teny English, polski, Français, Swahili, 繁體中文, Italiano, Español
Sombitsombiny avy amin'ny sary nataon'i Pictoline. Ireo tarehimarika dia mampiseho ny isan'ireo mpanao politika novonoina hatramin'ny nanombohan'ny fizotry ny fifidianana. “Meksika no niaina fizotry ny fifidianana mahery vaika indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy ary tena manaitra ny antontanisa”. Sary nahazoana alàlana.
Ity no ampahany fahatelo amin'ny andian-dahatsoratra nosoratanay momba ny fifidianana ho avy any Meksika , ny 1 Jolay 2018. Tamin'ny lahatsoratra voalohany, nojerentsika ny tantaran'ny demokrasia Meksikana taorian'ny 70 taona nitondran'ny antoko manjaka eo amin'ny fitondràna. Tamin'ny fizaràna faharoa, nojerentsika fohy ny tsirairay tamin'ireo efatra te-hifaninana ho fidiana ho filoham-pirenena. Amin'ity lahatsoratra farany ity, dia ireo fakàna ny hevi-bahoaka sy ny toe-draharaha ankapobeny eo amin'ny firenena no halalinintsika.
Inona no ambaran'ny fakàna ny hevi-bahoaka ?
Taorian'ireo adihevitra telo nokarakarain'ny manampahefana mikarakara ny fifidianana, dia roa herinandro eo ho eo sisa dia handeha hifidy ny Meksikana. Ireo mpaka ny hevi-bahoaka (Consulta Mitofsky, B&L, GCE raha tsy hanonona afa-tsy vitsivitsy) sy ireo famakafakàna ny fifidianana amin'ny ankapobeny (Oraculus), dia samy manondro mpitarika iray mazava. Ny tatitra rehetra dia milaza fa i Andrés M. López no lohany, manakaiky ny 50%-n'ny isam-bato, arahan'i Ricardo Anaya – lavidavitra.
Araka ny noresahanay tamin'ny ampahany farany tamin'ity andiany ity, dia ny antoko noforoniny (Movimiento Regeneración Nacional – MORENA) no nanolotra an'i Andrés M Lopez, taorian'ny filatsahany indroa tsy nahomby teo aloha.
Araka ny voalaza tao amin'ny ampahany voalohany, dia niaritra ny vokatry ny fifandonana mitàm-piadiana hatramin'ny 2006, fony nanambaran'ny filoha tamin'izany fotoana izany, Felipe Calderón, ny ‘ ady’ amin'ny heloka bevava voarindra i Meksika. Nanomboka teo, vao mainka nahery vaika ny herisetra. Tsy misy fiatoana na fampitsaharana ny ady nanangasanga– na dia mandritra ny fotoam-pifidianana aza.
Ao anatin'izany toe-javatra izany, mpanao politika 112 mpilatsaka ho fidiana no novonoina hatramin'ny nikarakaràna ity fifidianana ity, araka ny asehon'ity sarin'ny Pictoline ity :
Sary amin'ny bitsika: mpanao politika 112 no nisy namono tany Meksika hatramin'ny nanombohan'ny fotoam-pifidianana ; 42 ireo mpilatsaka ho fidiana na mihevitra ny hilatsaka ho fidiana ho amin'ny toerana voafidim-bahoaka ; tany Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, ary ny fanjakan'i Mexico ny ankamaroan'ny famonoana.
Lahatsoratra amin'ny bitsika: Tao anatin'ny herisetra mahery vaika kokoa no niainan'i Meksika ny fizotry ny fifidianana taona vitsivitsy izay. Ary mampitebiteby ny isa.
“Azonay antoka fa ireo mpanao heloka bevava no handresy”
Araka ny voalazan'ilay mpikatroka mafana fo Orlando Camacho:
Mampihorohoro ilay herisetra, taratry ny fahalemen'ny rafitra izany ; sarin'ny zava-misy marina iainan'ny firenena amin'ny resaka herisetra ireo fifidianana ireo.
Nanoratra ny profesora Jesús Silva-Herzog :
Herinandro vitsy lasa izay no nanambaràn'i Eduardo Guerrero tao amin'ny lahatsorany ho an'ny El Financiero ny azo antoka fa handresy amin'ireo fifidianana 2018. Tsy nikirakira ny angon-drakitra nalaina tamin'ny fakàna hevi-bahoaka izy. Tsy niresaka fifidianana filoham-pirenena izy. Niresaka ny momba ireo fikambanana mpanao heloka bevava izay, tsy miseho ôfisialy ao anatin'ny vatom-pifidianana, saingy manapaka hevitra amin'ny fifidianana, hoy ilay manampahaizana manokana momba ny fiarovana. Azontsika antoka fa handresy ireo mpanao heloka bevava ireo, satria novonoiny ny fahavalony sady nofeheziny ireo ho tompon'andraikitra ao amin'ny lapan'ny tanàna izay tena hiankinan'ny tombotsoan-dry zareo.
Amin'izao fotoana izao any Meksika, tsy amin'ny alàlan'ny fitaovam-piadiana no hahatongavana eo amin'ny fitondràna, fa fehezin'ny fitaovam-piadiana ny fidirana eo amin'ny fitondràna.
Tsy nandalo fotsiny teo anatrehan'ireo mpampahalàla vaovao iraisam-pirenena marobe io herisetra miely patrana io, toy ny El País , ohatra, izay nitatitra fa mpilatsaka ho fidiana anankiroa tany Oaxaca sy Puebla (any atsimon'i Meksika) no nisy namono tao anatin'ny 24 ora.
Fifampiraharahana ara-barotra sa ady ara-barotra ?
Amin'ny fotoana isehoan'izany, dia eo am-pamerenana ny fifampiraharahana momba ny Fifanarahana ara-barotra malalaka any Amerika Avaratra (NAFTA; TLCAN amin'ny teny Espaniola ) miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka voalohany ara-barotra aminy sy ny faritra manodidina i Meksika : Etazonia sy Kanadà.
Natao taorian'ny fampanantenana nataon'ny filoha Donald Trump tamin'ny fampielezankeviny tamin'ny fifidianana ilay fifampiraharahana, izay nanomezany toky ny mpanohana azy fa hitondra fanovàna vaovao ho an'ny tombotsoan'ny fireneny izy.
Nambaran'i Filoha Trump fa tsy araka ny tokony ho izy ny tombontsoa azon'i Meksika tamin'ny NAFTA sady nanao andianà fanamarihana manevateva ireo mpifindramonina izy. Ny ohatra vao haingana dia ny niantsoany ireo olona sasany avy any amin'ny sisintanin'i Meksika tonga any Etazonia hoe “biby”.
Na izany aza, raha hiverenana ny resaka ara-toekarena, dia nihasarotra ny teo-draharaha ara-barotra any Meksika noho ny fametrahan'i Etazonia haban-tseranana amin'ireo vokatra afarana avy any ivelany, baikon'i Trump, izay nahatonga an'i Meksika hanao valifaty.
Nofaritan'ny fampahalalam-baovao sasany any Meksika, isan'ireny ny SinEmbargo, ho ” ady ara-barotra” ilay teo-draharaha.
Jereo ny fizarana manaraka amin'ity andiany ity, rehefa dinihantsika amin'ny fomba fijerin'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety ireo fifidianana ho filoham-pirenena Meksikana ary resahantsika ny fifanakalozan-kevitra mafàna mitranga ao amin'ny haino aman-jery sosialy.